आहा ! रारा को फाईनल प्रवेशका लागि सहारा र आर्मी भिड्दै – Peacepokhara.com
आहा ! रारा को फाईनल प्रवेशका लागि सहारा र आर्मी भिड्दै
गोकुल बानियाँ , पोखरा १२ माघ । पोखरामा जारी १५ औं आहा रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा आज आयोजक सहारा क्लब र नेपाली सेनाको आर्मी क्लब भिड्दैछन् । फाईनल प्रवेशका लागि हुने यी दुई टिमको खेल पोखरा रंगशालामा दिउसो साढे २ बजेपछि सुरु हुनेछ ।
सहारा क्लब पहिलो चरणमा सुदुरपश्चिम र क्वाटरफाईनलमा युनाइटेड सिक्किम भारतलाई हराउदै अन्तिम चारमा आएको हो भने बाई पाएर सिधै क्वाटरफाईनल खेलेको आर्मी झापा ११ लाई पन्छाउदै सेमिफाईनल सम्म आइपुगेको हो ।
अघिल्लो संस्करणको सेमिफाइनलमा आयोजकको टिमलाई २-० ले हराउदै फाइनल यात्रा तय गरेको आर्मी यो पटक पनि जित दोहोर्याउने दाँउमा छ । तर आयोजकको टिम अघिल्लो बर्षको बदला लिदै तेस्रो पटक उपाधि होडमा पुग्ने लक्ष्य सहित मैदान उत्रनेछ ।
आहा रारा गोल्डकपको इतिहासमा तीन पटक फाइनल पुगेको आर्मी तीनै पटक उपविजेतामा सिमित भएको थियो । आर्मी अघिल्लो संस्करण सातौ र आठौ आहा गोल्डकपको उपविजेता टिम हो । १२ औं संस्करणको उपाधि जितेको सहारा ११ औं आहा रारा गोल्डकपको उपविजेता टिम हो ।
आजको विजेताले उपाधिका लागि माघ १५ गते संकटा क्लब र लक्ष्मी हुण्डाई मनाङमस्र्याङदी विच भोलि हुने खेलको विजेता सँग प्रतिश्पर्धा गर्नुपर्नेछ । प्रतियोगिताको विजेताले ५ लाख १ हजार १ र उपविजेताले २ लाख ५१ हजार १ सहित शिल्ड मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ ।
हिमपातमा हराएकाहरुको बिहानैदेखि खोजीकार्य जारी